बहालवाला मन्त्रीको मन्त्रालय नै गायब, के गर्दै छन् लालवावु ? :: a1nepal.com.np
बहालवाला मन्त्रीको मन्त्रालय नै गायब, के गर्दै छन् लालवावु ?
काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गरेकै दिन एमालेका लोकप्रिय नेता लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । कार्यभार सम्हालेलगत्तै पण्डितले उपत्यकामा मुख छोपेर हिँड्ने दिनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १७ मा झारेपछि उनले सम्हालिरहेको मन्त्रालयको अस्तित्व नै सकिएको छ । वातावरण वन मन्त्रालयमा र जनसंख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिएर उनको कार्यकक्ष छेउकै भवनमा नयाँ बोर्ड आइसकेको छ । अहिलेसम्म मन्त्री पण्डितको नयाँ कार्यविभाजनअनुसारको मन्त्रालय तोकिएको छैन । तर, पण्डित भने सअस्तित्वमै नरहेको मन्त्रालयको बोर्ड भएको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको ‘नेमप्लेट’ राखेर काम गरिरहेका छन् ।
पण्डितले सम्हालिरहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको नाम छ । तर, उनको मन्त्रालय दुईतिर परिसकेको छ । मन्त्रालय नभए पनि उनी सोमबार लामो समय कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बोर्ड तय भइसकेको छ । ती मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेमप्लेट छैन । सरकारको कार्यविभाजन अनुसार ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन् ।
पूर्व मन्त्री तथा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विक पक्राउ नागरिकको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै प्रदर्शनलाई नरोक्न सर्वोच्चको आदेश बालगृहका बालबालिकाको सिरानीमुनि बाइबल ! यस बर्षको मिस नेपालको उपाधी हात पारिन श्रृंखलाले रगत चेकजाँच गरेरमात्र विवाह गर्न एड्स संक्रमितको सुझाव एकै समय दुईतिर काम गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समाजमा महिला हिंसासँगै बढ्यो पुरुष हिंसा पनि … राष्ट्रियसभाका मनोनित सदस्यको सपथ रोक्न सर्वोच्चको आदेश उपत्यकाका पाँच अस्पतालमा प्रहरीको छापा, १७ नक्कली डाक्टर पक्राउ मेलम्चीको पानी चैत १५ सम्ममा राजधानीमा ल्याइदै
← डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल भावी प्रहरी महानिरीक्षक ! यस्ता छन् खनालका लोकप्रिय कामहरू	सामाजिक सञ्जालमा ठगी – ५१ लाख गुमाएको यो कथाले प्रहरी नै अचम्ममा ! →